ईमीनेन्ट एजुकेशन बुटवल ११ देवीनगरले सञ्चालन गर्यो अनलाइन इङ्गलिश ह्याण्ड राइटिंग कम्पिटिसन
माधव पौडेल ,पाणिनी।
वैशाख १९,अर्घाखाँचीबुलेटिन- विश्वभर फैलिरहेको कोरोनो भाइरस को कारण विश्व नै एउटा विषम परिस्थिति मा रहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
कोरोना भाइरसको कारणले लाखौ विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। कतिपय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडियाहरुले घरमै बसि शिक्षा आर्जन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यसै बिचमा Ns Engineering ले Imminent education को सहकार्य मा सञ्चालन गरेको छ ‍English Handwriting Competition जसमा प्रतिस्पर्धीले आफूले लेखेको handwriting लाइ imminent education काे official फेसबुक पेज मा एसएमएस गर्नु पर्नेछ! वा Imminent.edu@gmail.com मा मेल गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।
प्रतिस्पर्धी ले May १८ सम्ममा आफू ले लेखेको Handwriting पठाइसक्नुपर्ने छ ।नतिजा may २० मा निकालिने छ र पुरस्कार वितरण लक डाउन खुलेको केही दिन भित्र नै प्रदान गरिनेछ। जसमा प्रथम ,द्वितीय र तृतीय हुने लाई मेडल र सटिफिकेट दिइने छ। यस बारेमा कुनै जानकारी लिनु परेमा Er. दीपेन्द्र श्रेष्ठ र कपिल गौतम लाई फोन गरी लिन सक्नु हुनेछ ।दीपेन्द्र श्रेष्ठ : ९८५७०३०३०१
कपिल गौतम :९८६१९३४१०१ Imminent.edu@gmail.com